မူလစာမျက်နှာ - Forex Lens
သင်၏ကုန်သွယ်ရေး EDGE ကိုရှာပါ။
စောင့်ကြည့်လေ့လာပါ၊ အမြတ်အစွန်း အတူတူ
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြိုင်ဘက်ကင်းသော Forex အရောင်းခန်းသို့ဆက်သွယ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့ နေ့စဉ် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေသည့်နေရာ
New York ကာလအတွင်း ကုန်သွယ်မှု စိတ်ကူးများ
& နှင့်/သို့မဟုတ် လန်ဒန်အစည်းအဝေးများ။
PRO Trader တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါ။
အကျိုး တိုက်ရိုက် ဝင်ရောက်ခွင့် အတွေ့အကြုံရှိသော နည်းပညာဆိုင်ရာ လေ့လာသုံးသပ်သူများ အမေးအဖြေအတွက်၊ တုံ့ပြန်ချက်အပေါ်
ကုန်သွယ်မှုအကြံဉာဏ်များနှင့် သင့်အား အမြတ်အစွန်းရှိသော ကုန်သွယ်မှုစနစ်ထည့်သွင်းမှုများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
Forex၊ ကုန်စည်ဒိုင်၊ Indies နှင့် Crypto စျေးကွက်များတွင်။
ကုန်သွယ်မှု စိတ်ကူးများ ရယူပါ။
နာရီပေါင်း 400+ ဗီဒီယိုများရှိသော ပညာရေးဆိုင်ရာစာကြည့်တိုက်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
ကုန်သည်များကို ၎င်းတို့၏ ကုန်သွယ်မှုတွင် စစ်မှန်သော EDGE ပေးနိုင်ရန် ခိုင်မာသော ကုန်သွယ်မှုဗျူဟာများကို သင်ကြားပေးပါသည်။
Smart Money ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကို လေ့လာလိုပါသလား။
At Forex Lensငါတို့ မင်းကို အိပ်မက်တွေနဲ့ ကတိတွေ မရောင်းဘူး၊ ငါတို့ မင်းကို ရောင်းတယ်။ ရလဒ်. Forex Lens ကုန်သည်များအတွက် ကုန်သည်များအတွက် တည်ဆောက်ထားသော Institutional Forex ကုန်သွယ်မှုဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ဇယားများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ကုန်သည်များကဲ့သို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်သည်။ Forex Lens သူတို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်၊ (မည်ကဲ့သို့ ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် စိတ်ကူးထားသနည်း၊ စွန့်စားရန် အရင်းအနှီးမည်မျှ၊ ကုန်သွယ်မှုကို စီမံခန့်ခွဲနည်း၊ ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုမှ ထွက်ရန် အချိန်စသည်ဖြင့်)
Jeff Bezos ကဲ့သို့သော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော စီအီးအိုတစ်ဦးသည် တစ်နေ့လျှင် ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်း ၃ ချက်ချရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့လို နေ့စားကုန်သည်တွေက မြင့်မားတဲ့အဆင့်မှာ ဘယ်လို လည်ပတ်နိုင်မလဲ။ Forex Lens ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ smart money နေ့ကုန်သည်များအတွက်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ Forex Lens သင့်အား အကောင်းဆုံးသော ကုန်သွယ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်များကို နေ့စဉ်ပြုလုပ်ရန် ကူညီပေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ကို လုပ်ဆောင်ပြီး သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာ အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Discord ဆာဗာကို ဤနေရာတွင် ဆက်သွယ်ပါ။
တစ် ဦး ကအစစ်အမှန်ကုန်သွယ်အသိုင်းအဝိုင်း
သင်ဟာ သင်ကိုယ်တိုင် ဝန်းရံထားတဲ့သူပါ။ တက်ကြွသောကုန်သည်များ၏အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပူးပေါင်းပြီး အတွေ့အကြုံရှိပညာရှင်များထံမှ သင်ယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်တိုက်ရိုက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဗီဒီယိုများကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုနောက်ထပ်သို့တက်လှမ်းပါ။
နေ့စဉ်တိုက်ရိုက်လွှ & Market မှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
Forex၊ ကုန်စည်ဒိုင်များ၊ အညွှန်းကိန်းများနှင့် Crypto စျေးကွက်များတွင် သင့်အား အချိန်နှင့်တပြေးညီ စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပေးသည့် နေ့စဉ် ဗီဒီယိုအသစ်များ။ မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှု၏ဇယားကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် တောင်းဆိုပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များထံမှ အကြံပြုချက်ရယူပါ။
အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်ရေးအကြံပြုချက်များ & setups
ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာသုံးသပ်သူများသည် Smart Money နှင့် Supply & Demand ကုန်သွယ်မှုဗျူဟာများကို အသုံးပြု၍ ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားသော ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များ ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်အား ဦးတည်ချက်ဘက်လိုက်မှု၊ အဝင်အထွက်များနှင့် စွန့်စားရမှုစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကို ကူညီပေးပါမည်။
မတ်လ 4, 2022/by Forex Lens သတင်း
ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို ယနေ့ တိုက်ရိုက်အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်...
မတ်လ 3, 2022/by Forex Lens သတင်း
အမြတ်ယူ။ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်မယ့်နေ့ကို စတင်ဖို့ ဘယ်လိုနည်းလမ်းကောင်းလဲ။…
မတ်လ 2, 2022/by Forex Lens သတင်း
ယနေ့နံနက်တွင် တိုက်ရိုက်စျေးကွက်မွမ်းမံဆွေးနွေးမှုတွင် စျေးကွက်အခြေအနေ မည်သို့ရှိသနည်း...
မတ်လ 1, 2022/by Forex Lens သတင်း
အကောင်းမွန်ဆုံးသော ကုန်သွယ်မှုဝင်ရောက်မှုကို အဓိကငွေကြေးအများအပြားအတွက် ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်...
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2022/by Forex Lens သတင်း
Bitcoin ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည် ယမန်နေ့ကတည်းက ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ စျေးကွက် ပျက်သွားသည်...
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 25, 2022/by Forex Lens သတင်း
ရုရှားက ယူကရိန်းကို ကျူးကျော်ပြီး လှိုင်းလုံးတွေရဲ့ သက်ရောက်မှုတွေကို ဖုံးဖိထားပါတယ်...
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 24, 2022/by Forex Lens သတင်း
ကုန်သွယ်မှုစနစ်ထည့်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများကို ယနေ့ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွင်း စူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်...
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23, 2022/by Forex Lens သတင်း
Altcoin အမြတ်ငွေများသည် BTC နှင့်…
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2022/by Forex Lens သတင်း
ယနေ့နံနက် နယူးယောက် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွင် စျေးနှုန်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာထားသည်...
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 21, 2022/by Forex Lens သတင်း
ဒေါ်လာဈေး ပျမ်းမျှ ကုန်ကျစရိတ် - လူတိုင်းက အဲဒါကို ပြောနေကြပေမယ့် ဘာကြောင့်လဲ...
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 18, 2022/by Forex Lens သတင်း
စျေးကွက်အတွင်း မသေချာမရေရာမှုများကြောင့် လက်ရှိကုန်သွယ်မှုအန္တရာယ်ကို လျှော့ချပါ။...
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 2022/by Forex Lens သတင်း
မင်းရဲ့ Plan မှာ ဘာရှိလဲ။
ယနေ့ခေတ်တွင် ပိုမိုအမြတ်အစွန်းရှိသော ကုန်သည်တစ်ဦးဖြစ်လာရန် မည်သို့လေ့လာပါ။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုစွမ်းရည်ကိုအဆင့်သစ်တစ်ခုသို့ယူပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်စစ်ဆေး ...
ဧပြီလ 2, 2021/forexlens အားဖြင့်
အကယ်၍ ချောမွေ့သောပင်လယ်သည်ကျွမ်းကျင်သောသင်္ဘောသားတစ် ဦး ကိုမျှမလုပ်ခဲ့လျှင်၊
ဇန်နဝါရီလ 13, 2021/forexlens အားဖြင့်
နိုဝင်ဘာလ 3, 2020/forexlens အားဖြင့်
ကြီးကျယ်တဲ့ Alan Watts ပြောခဲ့သလိုပဲ
အောက်တိုဘာလ 14, 2020/forexlens အားဖြင့်
ကျွန်တော်အဆင့်မသတ်မှတ်နိုင်ဘူး Forex Lens အလုံအလောက်မြင့်မားသော! Brilliant ၀ န်ဆောင်မှု၊ သင်၌မေးခွန်းများရှိပါက၊ အကြံဥာဏ်များရယူပါကအမြဲတမ်းထိုနေရာတွင်ရှိနေသည်။ စျေးကွက်၏ကြီးစွာသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ! ကျိန်းသေအများကြီးပိုအသိပညာအကူအညီနဲ့အကြံဥာဏ်ကိုအောက်ပါ။ ဗဟုသုတပိုမိုလိုချင်။ Forex တွင်ကုန်သည်ဖြစ်လိုသူမည်သူမဆိုကိုအကြံပေးလိမ့်မည်။ "(2021)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့အရည်အချင်းကြောင့်သာမကမင်းကျောင်းသားတွေအပေါ်ထားတဲ့သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးသမားပဲ။ ” (၂၀၂၀)
Shirvan အက်စ်Pro ကုန်သည်အဖွဲ့ဝင်
“ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက forex signal service ကောင်းကောင်းပေးသူကိုကျွန်တော်ဒေါ်လာထောင်ချီပြီးအကုန်အကျခံခဲ့တယ်။ ပိုကြီးတဲ့စုံစုံတွေရှိတာကောင်းပါတယ်၊ ငါသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကိုမကြည့်မိတာ၊ ကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြတွေထဲကတစ်ခုနဲ့တူတူကုန်သွယ်မှုလုပ်နေတာနဲ့တစ်ချိန်ကကောင်းတယ်။ ငါကငါစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတာအတည်ပြုပေးတယ်။ "(2017)
" အတွေ့အကြုံကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းနှင့်မည်သို့အားလုံးပွင့်လင်းမြင်သာမှု။ အခွက်တဆယ်နှင့်ဗဟုသုတခွဲဝေမှုကောင်းမွန်သောပေါင်းစပ်မှု။ ကောင်းပြီ။ အလုပ်လိုပဲ။ ယောက်ျားတွေကတက်ထားပါ! "(2020)
Kaushal G. အPro ကုန်သည်အဖွဲ့ဝင်
"တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ တန်တယ်။ သူတို့ရဲ့ အရောင်းအ၀ယ်ခန်းထဲ ဝင်လိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ဖို့ တော်တော်လေး အသစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည် crypto အတွက် စျေးနှုန်းလုပ်ဆောင်ချက်ဗျူဟာကိုလည်း အသုံးပြုပြီး ၎င်းသည် အလွန်ထိရောက်သည်။ ငါအလွန်အကြံပြုလိုတယ်။ Forex Lens ရုံကုန်သွယ်သို့စတင်တဲ့မည်သူမဆိုရန်။ အခုသူတို့မှာအဆင့်မြင့်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးစိတ်တိုးပွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်သည်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ ငါကသူတို့ကိုငါ့အောင်မြင်မှုအများကြီး attribute! "(2020)
Forex မှ A သို့ Z မည်သို့ကုန်သွယ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ
Forex Trading ပညာရေး
Forex Signal များမှန်ကန်သောနည်းလမ်းကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
မတ်လ 18, 2020/Op Ed ကအားဖြင့်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 21, 2020/forexlens အားဖြင့်
ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာလေ့လာသုံးသပ်သူများ၏အတွေ့အကြုံများကိုမြှင့် တင်၍ သင်၏သင်ယူမှုကိုမြန်ဆန်စွာခြေရာခံနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများနှင့်စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူ Forex ကုန်သွယ်ခြင်းဖြင့် ၀ င်ငွေအရင်းအမြစ်ကိုမည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်းပြသသည်။
ကောင်းမွန်သောအရောင်းအ ၀ ယ်များအတွက်ရှာဖွေခြင်းဇယားကွက်အားမရေမတွက်နိုင်အောင်နာရီပေါင်းများစွာသိမ်းဆည်းပါ။ သင်ဆန်းစစ်ရန်သင့်အတွက်အကျိုးအမြတ်ရှိသောကုန်သွယ်ရေးအတွေးအခေါ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာပေးသည်။ မင်းရဲ့အချိန်ကိုပြန်ယူပါ ဘဏ္freedomာရေးလွတ်လပ်ခွင့်သည်ကြီးလှသည်၊ သို့သော်အချိန်လွတ်လပ်မှုသည်အရာအားလုံးဖြစ်သည်
ပိုမို၍ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များ - နှင့်ထိုထက်မကသော!
1 မျှသာမဟုတ်၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုကူညီရန် မတူညီသောကုန်သွယ်မှုဗျူဟာများ (ဥပမာ Smart Money) ဖြင့် နည်းပညာပိုင်းခြားစိတ်ဖြာသူအများအပြားကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိပါ — နှင့် အများကြီးပိုသက်သာသည်။
အပြည့်အဝစျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, ကုန်သွယ်ရေးစိတ်ကူးများ, Q & A အစည်းအဝေးများနှင့်အတူ - နေ့စဉ်! ကျွန်ုပ်တို့သင်ကြားပေးသည့်နည်းစနစ်များနှင့်ကုန်သွယ်ရာတွင်အစစ်အမှန်အစွမ်းကိုမည်သို့ဖော်ထုတ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ။ သင် Pro ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည် ပို၍ စည်းကမ်းပြည့်ဝပြီးအဝိုင်းလိုက်သောကုန်သည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်လေ့လာနေစဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းသောကုန်သွယ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်သရုပ်ပြကိုစတင်ပါ။ သင်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးဖို့စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲသင်၏ကုန်သွယ်ကျွမ်းကျင်မှု hone နိုင်ပါတယ်။ အရောင်းအ ၀ ယ်သည်ဘဝအတွက်သင့်ကိုပေးချေနိုင်သောစွမ်းရည်များဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အသင်းနှင့်အချိန်မရွေးဆက်သွယ်နိုင်သည် စိတ်တိုးပွား သို့မဟုတ်သင်၏မေးခွန်းများ၊ တုံ့ပြန်ချက်များနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံအီးမေးလ်ပို့ပါ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]။ သင်၏ကုန်သွယ်ရေးခရီးစဉ်အတွက်ကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့ဤနေရာတွင်အမြဲရှိနေသည်။
စျေးနှုန်းလုပ်ဆောင်ချက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း + EURUSD သည် အလွန်အမင်း ကျဆင်းသည်။
ကုန်သွယ်မှုသတ်မှတ်မှုများ + ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ကုန်သွယ်မှုအမြတ်အစွန်းများ
အမြတ်ရယူခြင်း + သော့ချက်ပစ်မှတ်များစွာကို ရောက်ရှိခဲ့သည်။
တိုက်ရိုက်စျေးကွက်အပ်ဒိတ် + NZDUSD နှင့် AUDUSD ရောင်းချသည့်အခြေအနေများ
အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်မှုဝင်ရောက်မှု + BTC နှင့် ETH ကာလတိုကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာများ
Bitcoin ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအပ်ဒိတ် + အမြတ်အတွက် EURGBP
ရုရှားသည် ယူကရိန်းကို ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်သည် + USOIL သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပစ်မှတ်ကို အမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိသွားသည်
ကုန်သွယ်မှုစနစ်ထည့်သွင်းခြင်း + Scalping အခွင့်အလမ်းများ
Altcoin အမြတ်ငွေ + AUDUSD တွင် ရောင်းအားကောင်းခြင်း။
စျေးနှုန်းလုပ်ဆောင်ချက် + USOIL ဆက်တင်များကို မျှဝေထားသည်။
ဒေါ်လာဈေး ပျမ်းမျှ- စောစောဝယ်နည်းနှင့် သင့်အမြတ်များကို သိမ်းဆည်းနည်း
ကုန်သွယ်မှုအန္တရာယ် + BTC နှင့် ETH မဟာဗျူဟာများကို လျှော့ချပါ။
1 ၏စာမျက်နှာ 52123>»
1 ၏စာမျက်နှာ 208123>»